Wacom oo 35 jirsatay ayaa ugu dabbaaldegtay qiimo jaban | Abuurista khadka tooska ah
Manuel Ramirez | | Design Graphic, Dhiirrigelinta
Wacom waa sumadda aasaasiga ah ee looxyada garaafyada ah. Maanta waxay ku dhawaaqday 35 guuradii si ay uga faalloodaan inay u bilaabeen qiimo dhimis dhammaan kuwa qorsheynayay inay iibsadaan mid ka mid ah kaniiniyada muuqaalkeeda cajiibka ah.
Shirkad lagu aasaasay 1983 Jabbaan iyo maanta u dabaaldegay 35 sano oo hoggaan ah adduunka kiniiniyada garaafyada. Shirkad maanta u heellan dadaal dhab ah si ay gacan uga geysato horumarinta dhammaan noocyada codsiyada 3D.
Waxaan ka hadleynaa shirkadda sameysay kiniinigii ugu horreeyay ee qalin dijitaal ah. Taasina waa sababta loo dabaaldegayo sanad-guurada 35-aad ee ay ku dhawaaqday qiimo dhimis ballaaran. Laga bilaabo maanta Oktoobar 1, ayaa Wacom Cintiq Pro 13 waxaa lagu heli doonaa 859,90 euro. Waxaan ka hadleynaa qiimo dhimis weyn markii sicirkeedii asalka ahaa uu ku sii jiro € 1099,90.
Aad u wuxuu dhimay qiimaha qaar ka mid ah moodooyinka Wacom MobileStudio Pro. Muxuu yahay kombiyuutar is-dhexgal ah oo aan ku keydin karno illaa 300 euro moodallo kala duwan. Kumbuyuutar loogu talagalay inuu awood u yeesho inuu dhaafo waxqabadka sare ee ay dalbadaan qaar ka mid ah barnaamijyada naqshadeynta iyadoon si dhib leh loo burburin.
Horey ayey aheyd bilo kahor markii Wacom lagu soo bandhigay magaalada Madrid qaar ka mid ah alaabteeda cusub. Midka cusub Wacom Intuos ama Cinti Pro 24 waxay ka mid ahaayeen kiniinnada aan awoodnay inaan ku tijaabino goobta. Alaabooyin taxane ah oo loogu talagalay naqshad xirfadeed taasna waxay noo oggolaaneysaa inaan la falgalno miiska shaqada sida kuwa kale aysan sameyn.
Sidoo kale Wacom waxay rajeyneysaa inay ku dhawaaqdo dalabyo succulent ah oo loogu talagalay barnaamijkaaga Wacom Intuos, mid kale oo ka mid ah badeecadaheeda calanka oo ay ku jiraan barnaamijyo sharaf leh oo loogu talagalay dib-u-hagaajinta sawir qaadista, rinjiyeynta iyo sawir gacmeedka; waxaad had iyo jeer fursad u heli doontaa inaad ku soo dhowaato software-ka badan sida Affinity.
Dhammaan sannad-guuradii 35aad ee mid ka mid ah shirkadaha naqshadeynta walax ka weyn oo taasi meel gaar ah ku leh, had iyo jeer ku xigta Adobe iyo kuwa kale oo badan. Shirkadaha noo ogolaada inaan kor u qaadno xirfadaheena faneed.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Dhiirrigelinta » Wacom waxay u dabaaldegeysaa sanad-guuradii 35aad iyada oo qiimo dhimis ballaaran lagu sameeyay
Mailchimp wuxuu huruud u noqdaa qaabeynta dib u qaabeynta